SUUGAANTII AAN NAXLIGA IYO LAAXINKA MIDNA AAN LAHAYN EE XAAJI ADEN AFQALOOC | Toggaherer's Blog
« MUDAHARAAD SALMI AH OO KA DHICI DOONA WAAXDA GACANLIBAAX!!!!!!!
CODKAAGA KU CIIL BAX QORMADII 3 AAD BY;AXMED CARWO »
SUUGAANTII AAN NAXLIGA IYO LAAXINKA MIDNA AAN LAHAYN EE XAAJI ADEN AFQALOOC
Suugaantii aan naxliga iyo laaxinka midna aan lahayn
Ee Xaaji Aadan Axmed Xasan (Aadan af-qalooc)
Bismillaahi Raxmaami Raxiim, balaayow naga baydh, Barkhadii allay soo deg, Barkhadii Xaaji Aadanee soo deg. Waxaan bisinka u cuskaday ee aan ugu quudhay qoraalkaygan , waxaan doonayaa in aan ka hadlay “hal aan tebeyey” oo ah buug amma kitaab lagu soo ururiyey suugaantii barkhada lahayd, intii laga hayey, alla ha u naxariistee Xaaji Aadan Axmed Xasan, oo anigu markaan akhriyey ee aan muddo dheer ku noqnoqday, ee aan doc kastaba ka eegay, ee aan axdhay ee aan rogrogey, ii la ekaatay, hadalkii oo kooban, suugaan muqadas ah.
Qoraaga u hiiliyey Xaaji Aadan oo hortii cidi u hiilin weydey , af iyo qalin midnaba ; ee isku xilqaamay ururintii suugaantiisa iyo reed ka reebkeeda, ma ah marcurada oo ma aha kani buugii ugu horeeyey ee uu soo saaray. Waxaa uu hortii soo saaray laba buug oo kala ahaa Ururintii sugaanta Maxamed Ibrahim Warsame (Hadraawi) iyo Guri waa Haween.
Haddaba suugaanta aragtida dheer leh ee tirada iyo tayadaba leh ee Xaaji Aadan Afqalooc tiriyey, umma caan ah sida tii guba ee uu bilaabay Cal dhuux Aadan, iyo qaar kale oo badan oo lahayn aan aragti qota dheer.
Markaan Akhriyey suugaanta Xaajiga waxaan is idhi qoraagu malaha wuxuu Xaajiga Aadan u doortay Abwaanada haatan jooga ayuu dhaliilayey, waayo waxaa la yidhaa ninka wadaad maqan ammaanaa oo aan goobta joogin, wuxuu dhaliilayaa mid markaa goob jog ah oo uu u bogi waayey wacdigiisii iyo aqoontiisii diimeed. Waa malahayga markaan u dhabagalay wixii Maxamed Bashe Xasan, qoraaga buugani ka soo weriyey Xaaji Aadan Xasan.
Suugaanta Xaaji Aadan xasan waa suugaan dhab ah oo aan dhallanteed ahayn. Waa suugaan aan weligeed gaboobeen. Waa suugaan aan Gardarada Aadamaha gees biiciid u lahayn. Markaad akhrido waxaad arkaysaa in aannay ahayn mid dhuuni iyo magaca midna lagu raadineyn (Raali ahaada intiina aan weli akhriyinee). Waxaad arkaysaa in aan abwaanku marna koox gaar ah ugu hiilineyn xaqa iyo garashada mooyee.
Bal qalin ruuga iyo qoraal maalku ha ii danbeeyaana, miyaad aragtay weligaa abwaan jooga iyo kuwii tagey oo ka mid ah kuwa lagu dhaato oo ku hal qabsanayaa amma xusaya Xaaji Aadan Af-qalooc magaciisa. Anigu ma arag, mana maqal ee bal hadday dhif iyo nadir tahay oo anigu gefay ila soo socodsiiya. Miyaad aragtay idaacad iyo dawlada xil iska saartay in ay daabacado amma xil iska saarto abwaankan uurrku Ciroo laha ah ee Idin ku ciroo laha.
Haddii Xaaji Aadan Axmed Xasan uu ka dhallan lahaa beelaha Yurub iyo Amerika, waxaan hubaa in laga qori lahaa kumanyaal buug, lagana samayn lahaa kumayaal filim iyo kumayaal riwaayadood. Laakiin nasiib darro wuxuu ka soo geeska Afrika oo aan hiddo iyo dhaqan midna u lahayn oo aan aan markuu ku noolaana waxba loo qirin, markuu dhinta qaarkood weli la tartamaan oo qaarkood hadday doonaan ka naxyaan samafalkiisii dheeraa.
Qore: Muriidka C/llaahi Suldaan Timade C/llaahi Suldan (Timacadde)